Izindaba - Uyini umqulu ebhodleleni? Isicelo uhla roller amabhodlela
Uyini umqulu ebhodleleni? Isicelo uhla roller amabhodlela
Kunesidingo esikhulu sokuseshwa kwegama ngezimonyo ezimbili: eyodwa iyi-a gingqa ebhodleleni kanti enye iyi- ibhodlela le-roller. Kepha ziwuhlobo lomkhiqizo.Ukugoqwa kwamabhodlela ngamabhodlela e-roller, kepha imikhuba yokusesha yawo wonke umuntu yehlukile. IShanghai Rainbow Imboni Co., Ltd. ikutshela ukuthi umqulu ebhodleleni uyini nokuthi usetshenziswa kuphi.
Yini i- gingqa ebhodleleni?
Roll-on ibhodlela, owaziwa nangokuthi roller ibhodlela, luhlobo olujwayelekile kakhulu lwebhodlela lokupakisha leplastiki futhi lisetshenziswa kakhulu ngabantu. Amabhodlela e-roll-ball ngokuvamile anomthamo omncane. Ama-rolling balls afakwa ekhanda lamabhodlela ukuze abantu bakwazi ukufaka ngokulinganayo, bavikele ukuvuza oketshezi, futhi babe nomphumela wokubhucungwa umzimba. Imvamisa isetshenziswa njengokupakisha okhilimu bamehlo bezimonyo, izindebe zomlomo, iziphunga, okhilimu bobuso, amafutha abalulekile, imithi, ama-gel antipyretic, nemikhiqizo yezingane. Kunezinhlobo ezimbili zeamabhola ama-roller ekhandayamabhodlela e-rollerball: amabhola epulasitiki nensimbi. Ngokuvamile, amabhola ensimbi asetshenziselwa amabhodlela okhilimu wamehlo wezimonyo, kuyilapho oplastiki besetshenziselwa imikhiqizo eshibhile njengezindebe zomlomo, kuya ngentengo yomkhiqizo.
Ububanzi bokusetshenziswa kwe- amabhodlela ama-roller
Izimonyo zisetshenziswa ngokujwayelekile emabhodleleni e-roll-on. Uma kuqhathaniswa ne-spray, i-roll-on bottle ingafaka ngokulinganayo i-antiperspirant kanye ne-lotion yomzimba esikhunjeni, futhi isikhumba sizizwa sipholile ngemuva kokuqhubeka. Kwezinye izindawo eziqokiwe,imikhiqizo roll-on zingcweti kakhuluHanghai Rainbow Imboni Co., Ltd.. uchwephesheroll kumkhiqizi wamabhodlela.
Ukupakisha kwemithi kungenye indawo yesicelo ebalulekile yamabhodlela e-roller. Njengomphathi wejel ye-antipyretic, ibhodlela le-rolleringasabalalisa ngokulinganayo ijeli elenza imithi esikhunjeni elidinga ukushisa ukushisa, futhi ngasikhathi sinye, umuzwa opholile ulungele ukushisa ukushisa. Kugwema ukucasuka nokungahambi kahle okubangelwa ukushabalalisa ukushisa kwendabuko ngokomzimba, futhi kuthuthukisa ukungalingani kwesicelo semanuwali.
Izinkinga okufanele zinakwe lapho kufakwa ibhodlela amabhodlela okugoqa
Siyazi ukuthi ibhodlela eliqediwe livame ukufakwa ebhodleleni ngesandla ngemuva kokukhiqizwa komzimba nokhokho. Ngokuvamile, ukufaka amabhodlela kudinga ukuqinisa ikepisi kancane, okushesha, kepha ibhodlela lokugoqa linobuhlalu obuningi ekhanda lamabhodlela, ngakho-ke ukufaka ibhodlela kuyinkinga kakhulu futhi kudla isikhathi. Ngaphezu kwalokho, ngobaroller ibhola ibhodlela ikhanda ibhola lensimbi, kuzodala ubuhlungu bomunwe lapho ucindezelwa emzimbeni webhodlela, futhi inani elikhulu lamabhodlela lizodala ukulimala komunwe. Ngakho-ke, kungcono ukugqoka amagilavu ​​ukuze uzivikele lapho ugcwalisa ibhodlela le-roller ball. Iminwe.
IShanghai Rainbow Industrial Co, Ltd ngumkhiqizi, Umkhiqizo wayo yi-RB PACKAGE, iphakethe le-rainbow lase-Shanghai Nikeza ukupakisha okukodwa kokumisa.
Uma uthanda imikhiqizo yethu, ungaxhumana nathi,
Isikhathi Iposi: Aug-09-2021